‘व्यवसायीको विश्वास ममाथि छ’ « Loktantrapost
‘व्यवसायीको विश्वास ममाथि छ’
१३ श्रावण २०७३, बिहीबार १५:२९
सुरुङ्गाको सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय युवा व्यक्तित्व कुमारमणि पोखरेल भोलि (साउन १४ गते) हुने कनकाई उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनावमा अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनेका छन् । उनीसँग लोकतन्त्र पोस्टले लिएको अन्तरवार्ता पढ्नुहोस्–
–मेरो उम्मेद्वारी कनकाई उद्योग वाणिज्य सङ्घको अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा विगतमा कनकाई उद्योग वाणिज्य सङ्घको मातहतमा रहेको कनकाई अतिथि सदन निर्माण सम्पन्न गर्न ध्यान केन्द्रित भयो । र, अबको दिनमा युवाहरुको सर्कललाई एकतावद्ध गरेर हिँड्नका लागि मेरो उम्मेद्वारी हो । स्थानीयस्तरबाटै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि, व्यापारको विकास, व्यवसायको विकास र स्थानीयस्तरमा हामीले जुन बन्द निषेधित क्षेत्र सुरुङ्गा बनाएका छौँ । अहिले कनकाईको रुप लिएको छ । र, बन्द निषेधित कनकाई नगरमा राष्ट्रिय पूँजीलाई आकर्षित गर्न हामीले खास कार्यव्रmम बनाएका छौँ । बुँदागत रुपमा हामीले प्रष्ट रुपमा प्रस्तुत गरेका छौँ । तिनै कुराहरुलाई व्यावसायिक र सामाजिक दायित्वका रुपमा रुपान्तरण गर्न समग्र कनकाईबासीको हितका लागि ती बुँदाहरु अघि सार्दै मेरो उम्मेद्वारी नगरबासी समक्ष राखेको छु ।
–मलाई पूर्ण विश्वास छ । मेरो जीत सुनिश्चित भइसक्यो । सँगसँगै मलाई के लाग्छ भने हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा छौँ । स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । जीतलाई पनि सहज रुपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । र, हारलाई पनि स्वाभाविक प्रव्रिmया हो भनेर लिनुपर्छ । व्यवसायीको विश्वास ममाथि छ
कस्ता–कस्ता व्यक्तिलाई तपाईंले प्यानलमा समावेश गर्नुभएको छ ?
–निक्कै महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । म विगत २ वर्षदेखि कनकाई वाणिज्य सङ्घसँग आवद्ध छु । र, कनकाई उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग आवद्ध धेरै समितिकै साथीहरुको सल्लाह बमोजिम नै मैले उम्मेद्वारी प्रस्तुत गरिरहेको छु । र, कनकाई उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु मेरो टीममा समावेश हुनुहुन्छ । र, केही युवा साथीहरुलाई पनि हामीले सहभागी गराएका छौँ । समग्र रुपमा सामाजिक विकासमा योगदान दिन सक्ने खालका युवाहरु मेरो प्यानलमा हुनुहुन्छ । सबैसँग सहकार्य गर्न सकियो भने भोलि प्रष्ट बहुमत आयो भने अहिले हामीले गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न कहीँ चुक्ने छैनौं भन्नेमा हामी सबै कटिवद्ध छौँ ।
कनकाई नगर क्षेत्रका व्यापार–व्यवसायीका समस्या चाहिँ के–के रहेछन् त ?
–समस्या अनगिन्ती छन् । म केही प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने, हामी अहिले प्राकृतिक रुपमा सम्पन्न र आर्थिक रुपमा विपन्न मुलुकको सानो नगरको उद्योगी व्यवसायीको नेतृत्व चयनका लागि मैदानमा होमिएका छौँ । हाम्रो आर्थिक परिधिहरु, आर्थिक सीमाहरु फरक छन् । विपन्न राष्ट्रको सानो नगरको आर्थिक हैसियत के हुन सक्छ ? त्यहाँ भित्री रहेर पनि कसरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ? युवाहरु लागेमा देशको र समाजको मुहार फेर्न सम्भव छ भन्ने पुष्टि यो चुनावी अभियानपछि प्रस्तुत गर्ने छौँ । आजसम्म युवाहरु एक भएर हिँड्दा सबै काम पूर्ण भएका छन् । यी काम पनि पूरा गर्र्छाैं । यथास्थितिमा रहेको वाणिज्य सङ्घलाई अगाडि बढाउन हामी सक्षम हुन्छौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ ।
–चुनावी अभियानका व्रmममा मेरा धारणाहरु राखिसकेकी छु । हामीले अब गर्ने कामका बारेमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर हाम्रा एजेण्डा सार्वजनिक गरेका छौँ । हाम्रो भिजन हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ । कनकाईलाई बन्द निषेधित क्षेत्रको रुपमा स्थापित गरिरहँदा यहाँको तरकारी बजार, फलफूल बजार, खुद्रा, रेडिमेट बजारको व्यवस्थापन, कर र व्यवसायको सम्बन्धको कुरा छ । बजार विकास र विस्तारको कुरा छ । र, व्यवसायीहरुलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने, बजारमा खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्छ । धेरै आधारभूत भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्न बाँकी नै छ । र, विगतमा कनकाई अतिथि सदन निर्माणमा अल्झिएको कनकाई उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन योजनावद्ध रुपमा आएका छौँ । तालिम शिक्षा तथा व्यवसायीलाई सीप विकासका लागि परामर्श दिने पनि हाम्रो योजना छ । सङ्घ र व्यावसायिक बीच समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
–हामीले जसले जिते पनि कनकाई नगरको विकासमै केन्द्रित हुन्छौँ । हाम्रो टिम विजयी हुन्छ भन्ने छनक हामीलाई चुनावी प्रचारको व्रmममा नगरबासीले दिनु भएको साथ र विश्वासबाट पाइसकेका छौँ । हाम्रो प्यानल विजयी भयो भने उपविजयी टिमका साथीहरुलाई सँगै लैजान्छौँ । उहाँहरुसँग पनि सरसल्लाह गरेर अघि बढ्नुपर्छ । काम गर्न सबै नगरबासीको सहमति चाहिन्छ । र, व्यापार व्यवसायीको हकहितका लागि निर्वाचनसम्म मात्रै दुई वटा प्यानल हो । त्यसपछि हामी एकढिक्का भएर अघि बढ्छौँ । चुनावी प्रसार–प्रसार पनि स्वच्छ र लोकतान्त्रिक विधिबाट गरिरहेका छौँ । त्यसैले चुनावमा जसले बहुमत ल्याए पनि हामी यो क्षेत्रको विकासका लागि सधैँ एकढिक्का हुन्छौँ । सबैलाई समेट्नु असल नेतृत्वको दायित्व पनि हो ।
एउटै पार्टीमा आस्था राख्ने दुई जना भिड्दै हुनुहुन्छ, यसले कतै गलत म्यासेज त जाँदैन ?
–गलत सन्देश जाँदैन । किनभने हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दै छौँ । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास राखेर अगाडि बढ्दै छौँ । सँगसँगै म के पनि भन्नु चाहन्छु भने म कुनै राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह लिएर नेतृत्वका लागि अगाडि आएको होइन । यो उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचन हो । सामाजिक संस्थाको रुपमा यसलाई धारणा गरेर निर्वाचनमा जाँदैछु । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक गठबन्धन हुनसक्छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि यसलाई महत्वपूर्ण मान्नु भएको छ । यसमा कुनै विवाद छैन । यसरी गइरहँदा कुनै राजनीतिक दलले मेरो उम्मेद्वार यो भन्नु गैरप्रजातान्त्रिक कुरा हो । राजनीतिक दलले समर्थन गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा सामाजिक सङ्घसंस्थामा मेरो उम्मेद्वार यो भन्नु, किटान गर्नु, गैरप्रजातान्त्रिक हो भन्ने लाग्छ मलाई ।
अन्त्यमा आफ्ना मतदाता, शुभचिन्तक र कनकाई नगरवासीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
–उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनावी दौरानमा मैले मेरा योजनाहरु, एजेण्डाहरु र धारणाहरु सार्वजनिक गरिसकेको छु । यी हाम्रा भिजनहरु पूरा गर्न कनकाई नगर क्षेत्रका व्यापार व्यवसायीहरुले मत दिएर एक कार्यकालका लागि हामीलाई जिम्मेवारी दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । सम्पूर्ण आमा, बुबा, दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरुमा व्यावसायिक हकहितका लागि लड्ने अवसर प्रदान गर्न मलाई विजयी गराउनु हुन्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । जय र पराजय चुनावी प्रव्रिmयासम्म मात्र हुन्छ । चुनावी प्रव्रिmया सम्पन्न भएपछि हामी सबै कनकाई नगरकै बासिन्दा हौँ, एकअर्काको दाजुभाई हौँ, हामी एक हौँ, हाम्रो परिवार यही हो । स्वस्थ्य प्रजातान्त्रिक प्रव्रिmयाबाट नेतृत्व चयन गर्दैछौँ । हामी सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्छौँ । मतभेद हुने छैन । हामी कनकाई नगरको विकासका लागि एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छौँ । त्यसैले यही एकताका लागि सहमतिका लागि हाम्रो प्यानललाई विजयी गराउनु हुन अनुरोध छ ।